लकडाउनपछि उपासनाले बढाएको व्यस्तता,सेड्युलमा छन् यी चलचित्र. – live 60media
लकडाउनपछि उपासनाले बढाएको व्यस्तता,सेड्युलमा छन् यी चलचित्र.
‘क्याप्टेन’ चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी उपासना सिंह ठकुरीलाई पहिलो चलचित्रबाट नै सम्भावना बोकेकी अभिनेत्रीको रुपमा हेरियो। ठिकठाक प्रशंसा पाएको चलचित्रमा उपासनाले पनि नेपाली दर्शक र चलचित्र मेकर्समा राम्रो छाप छोड्न सफल भईन्।
त्यो लगतै उनले हिट सिरिज कबड्डीको तेश्रो सिक्वेलमा काम गरिन्। यसले उनको चर्चा र माग राम्रै संग बढायो। पढाइको लागी भने केहि समय ब्रेक लिएकी उपासनाको लागी यतिबेला भने चलचित्रको सुटिङ्ग सेड्युल मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। आर्यन सिग्देलसंग जोडी बाधेर उनि यतिबेला चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’ को सुटिङ्गमा रहेकी छिन्। चलचित्रको ३० प्रतिशत सुटिङ्ग बाँकि रहेको छ। आर्यनसंग नै जोडी बाँधेर उनि चलचित्र ‘मिरर’ मा काम गर्दैछिन्।
कोरियोग्राफर कविराज गहतराजको डेव्यु निर्देशनमा यो चलचित्र तयार हुन लागेको हो। यो संगै राजेश हमाल, पल शाह, अनुपविक्रम शाही संगको उनको अर्को चलचित्र ‘सत्यम’ को लागी पनि उनले समय मिलाउन आवश्यक रहेको छ। उपासनालाई बाँकि चलचित्रको लागि समय मिलाउन हम्मेहम्मे पर्ने निस्चित देखिन्छ।
← ५ श्रीमती ल्याएका श्रीमान बेपता,थियो अरुसंग पनि नाजायज सम्बन्ध
तीन महिने सुत्केरि फोहोर टिपेर परिवार पाल्दै ,मुटु दह्रो पारेर हेर्नुस् (भिडियो सहित) →